सुजीतले आफ्नो निवेदनमा आरोप लगाएका छन की उनले आफ्नो गीत मार्फत नारीलाई अनादर गरेको र समाजको छवी खराब पारेको छ ।
बेलुकी ५:५७ बजे
न्यूज ब्यूरो, भारत । अश्लिल गीत गाएर चर्चामा आएका भारतको बिहार राज्यका गायक खेसारीलाल यादव विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
भोजपुरी फिल्मको सुपर स्टार रहेका खेसारीलालमाथि अश्लिल गीत मार्फत महिलालाई अपमान गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीमाथि कैयौँ धारा लगाएर मुद्दा दायर गरिएको भारतीय सँचारमाध्यमहरुले जनाएको छ ।
बिग बोस सिजन १३ को कन्सटेन्टेन्ट समेत रही सकेको खेसारीलाल यादव विरुद्ध सनातन सेवा फाउण्डेशनका प्रमुख सुजित सिँहले मुम्बईमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
मुद्दामा खेसारीलाल यादवले आफ्नो गीत गानामा महिलाहरुप्रतिको अपमान र अश्लिला देखाएको आरोप सहित मुद्दा दर्ता गरिएको हो । उनले पैसा कमाउनकै लागि आफ्नै देशका महिला नभएर समग्र नारी जातीलाई नै अश्लिल शब्द मार्फत बेईज्जत गर्दै आएको आरोप छ ।
मुद्दामा खेसारीलाल यादवले गाएको गीत चाचीके बचिया सपनवामे आती है लाई जोडेर उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । उनले केही दिन अघि लाईभ आएर आफू विरुद्ध गीत गाएको भन्दै पैसाको बलमा जिन्दगी बर्बाद पारिदिने धम्की पनि दिएका थिए ।
सुजीतले आफ्नो निवेदनमा आरोप लगाएका छन की उनले आफ्नो गीत मार्फत नारीलाई अनादर गरेको र समाजको छवी खराब पारेको छ । उनलाई विभिन्न धारा लगाएर कारवाहीको माग गरिएको हो ।
यता, भोजपुरीका मेगास्टार, बलिवुड अभिनेता एवम् बिजेपीका साँसद रवी किशनले पनि अश्लिल गीतलाई सेन्सर गर्न माग उठाएका छन् । अश्लिल गीत गाउनेलाई कारवाहीको लागि प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन् ।
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधामदेखि केही दुरीमा रहेको धनुषाको बालगँगास्थित मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यू भएको छ । धनुषाको हँसपुर नगरपालिका वडा नं. ९
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधामदेखि केही दुरीमा रहेको धनुषाको बालगँगास्थित मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा एक युवकको मृत्यू भएको छ ।
धनुषाको हँसपुर नगरपालिका वडा नं. ९ बालगँगास्थित स्थित आईतबार राती करिब ९ः२० बजेको समयमा मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा युवकको मृत्यू भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता (डिएसपी) मकेन्द्र मिश्रका अनुसार, धनुषाको कमला नगरपालिका वडा नं. ३ पर्सा टोल बस्ने रघुवीर यादवका ३४ बर्षिय छोरा शँकर यादवको मृत्यू भएको हो ।
गएराती पर्साबाट जनकपुरको लागि गइरहेको अवस्थामा बालगँगाचोक स्थित रहेको घुमाउरो (मोड) मा प्रदेश ३–०२–००९ प ७८१९ नम्बरको मोटरसाईकल अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
तीव्र गतिमा चलाएको मोटरसाईकल आफैँ अनियन्त्रित भएर मोडमा घुमाउन खोज्दा चिप्लेर दुर्घटना भएको प्रत्यक्षदर्शीहरुलाई उदृत गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
दुर्घटनापछि गम्भिर घाईते भएका यादवको हात, खुट्टा, ढाड, पियुठ सहित शरिरको विभिन्न भागमा गम्भिर चोट लागेको थियो भने उनको उपचारको लागि तत्कालै जनकपुरको प्रादेशिक अस्पताल ल्याइएको थियो । उनको उपचारकै क्रममा गएराती नै मृत्यू भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मृतक शँकरको एक छोरा र एक छोरी छन् । छोरा अन्दाजी १० बर्षका छन् भने छोरी अन्दाजी ८ बर्षकी हुन् । शँकरको मृत्यूसँगै परिवारजनमा शोकको बज्रपात भएको छ ।